Arin ugub ah-Sidee ku dhacday in ilmo Sagaal sano jir ah uu jaamacad ka qalinjabiyo? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Arin ugub ah-Sidee ku dhacday in ilmo Sagaal sano jir ah uu...
Arin ugub ah-Sidee ku dhacday in ilmo Sagaal sano jir ah uu jaamacad ka qalinjabiyo?
Ilma yar oo caaqil ah, da’diisuna ay tahay sagaal sano ayaa ka qalinjabiyay jaamacadda Eindhoven ee dalka Netherlands.
Ilmahan oo u dhashay dalka Belgium-ka ayaa dhameeyay jaamacadda, oo waxaa uu haatan qaatay shahaadada labaad ee jaamcadda ama degree-ga waxa afka qalaad lagu yiraahdo.
Laurent Simons ayaa bartay maaddada electrical engineering ama injineernimada korontada, maaddadaas oo ah mid xitaa ku adag dadka waaweyn.
Bisha dambe ee Dismebar ayaa lagu wadaa in Laurent uu ka qeybgalo xafladda qalinjabinta, waxaana lagu tilmaamaa “ilmihii qeyrul caadiga ahaa”.
Waxaa uu haatan qorsheynayaa in uu usii gudbo qeybta kale ee jaamacadda, sii uu usii wato waxabarashadiisa. Laurent waxaa uu sidoo kale doonaya in uu barto dhakhtarnimada.
Laurent ayaa markii ay da’diisu ahayd afar sano waxaa uu ku biiray dugsiga hoose, halka dugsiga sarena uu ku biiray isagoo lix sano jir ah, haatan oo uu sagaal sano jirana waxaa uu dhameeyay jaamcadda.
Waalidka dhalay ilmahan oo lagu magacaabo Lydia iyo Alexander Simons oo wax laga weydiiyay caaqilnimada wiilkooda ayaa sheegay in awoowyadii ay horay u yirahdeen “Lauren waa nin caqli badan”, balse iyaga ay xiligaas u heysteen in ay iska amaanayaan oo ay ka badbadinayaan.
Caaqilnimada Laurent ayay shegeen in ay ogaadeen macallimiintiisa.
“Waxay ogaadeen in Laurent uu yahay qof qeyrul caadi ah ,” ayay tiri hooyadii.
Waalidiinta dhalay Laurent ayaa sheegay in ay ogaadeen ka dib markii laga qaaday dhowr tijaabo oo imtixaan ah, dhammaantoodna uu ku guuleystay.
Inkastoo Laurent uu ka soo jeedo qoys wada dhakhaatiir ah ayaa haddana waalidkiisa waxaa ay shegeen in ilaa iyo iminka aanay fahmin sababta uu wiilkooda u yahay qof caaqil ah oo durbaba wax qaban kara, si fududna u fahma waxwalba oo la baro.
Hasayeeshee, hooyada dhashay wiilkan ayaa tuhmeysa in sababta uu wiilkeeda u maskax furan yahay ay tahay kalluun badan oo ay cuni jirtay xilligii ay caloosha ku waday Laurent.
“Intii aan uurkiisa lahaa waxaan cunay kalluun badan,” ayay tiri hooyadii.
Jaamacaddii uu wax ka dhiganayay Laurent ayaa u oggolaatay in uu dedejiyo maadooyinkii uu baranayay, iyagoo qiimeynaya fahamkiisa. Sjoerd Hulshof oo madax ka ah Jaamacadda uu dhigto Laurenta ayaa sheegay in xaaladda Laurent aysan ahayn mid ku cusub.
“Ardayda gaarka ah waxaa jirta sabab ay u boobsiiyaan maadooyinka ay bartaan, sidaas si lamid ahna waxaan arrintaas oo kale u sameynaa ardayda kaalimaha koowaad gala”, ayuu yiri Sjoerd.
Wuxuu Hulshof intaa ku daray in Laurent uu yahay qof qeyrul caadi ah.
“Laurent waa ardyagii ugu horeeyay ee noociisa ah ee aan aragno, mana ahan ardaygii ugu horeeyay ee caaqil ah ee wuxuu sidoo kale yahay qof maskax badan oo aad u naxariis badan “, ayuu raaciyay.
Laurent o la hadlay BBC-da ayaa sheegay in madooyink uu jeclaa in uu barto ay tahay injineernimada korontada, haatanna uu bilaabayo in uu barto dhakhtarnimada.
Previous articleOraahyadii ugu caansanaa ee laga diiwaan galiyay Maxamed Siyaad Barre
Next articleMuxuu yahay hadalka la dhibsaday ee uu jeediyay Sheekh Saciid Raage?
TOOS U DAAWO:Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo bilaabatay
Hoggaamiyaha Ahlu sunna oo gaaray mid kamid ah caasimadaha Africa kuyaalo
Xasan Sheikh oo shaaciyay 6-Qodob oo diirada lagu saaray kulankii ay la yeesheen Farmaajo
DAAWO:C/raxmaan C/shakuur oo jeediyay khudbad walaac xoogan ku abuurtay madaxdii ka qeyb gashay caleema saarka
Dhageyso:-Gud Degmada Balcad Oo Shaaciyay Waxa Sababay Dagaalkii Ka Dhacay Degmadaas
Xildhibaanno Puntland Ah: Cadaaladda Hala Keeno Dadkii Kufsaday Kadibna Dilay Caasha (Dhageyso)
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka digay Qorshe uu sheegay in uu waddo Madaxweyne Farmaajo
Dhageyso: Duqa B/weyne Oo Diiday Amar Lagu Soo Xiri Lahaa & Xaalka Oo Isku Badelay Mid Halis Ah
SAWIRO:Xubno ka tirsan Guddiga Doorashooyinka Qaranka & Xisbiyada Mucaradka oo kulmay